Daawo: Sanbaloolshe oo shuruud adag ku xiray murashaxnimadiisa xilka madaxweynaha Hirshabeelle | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Daawo: Sanbaloolshe oo shuruud adag ku xiray murashaxnimadiisa xilka madaxweynaha Hirshabeelle
Daawo: Sanbaloolshe oo shuruud adag ku xiray murashaxnimadiisa xilka madaxweynaha Hirshabeelle
Wareeysi dhinacyo badan taabanayay ee uu xalay siiyey muuqaal baahiyaha Universal Soomali TV ayuu taliyihii hore ee hay’ada nabad sugida iyo sirdoonka qaranka Cabdullahi Maxamed Cali Sanbaloolshe ku xaqiijiyay in uu yahay musharax rasmi ah oo u taagan qabashada xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Walow uu shuruud adag ku xiray.
Siyaasigaan geed fadhiga ah tan iyo dhamaadkii 2017 ayaa dadka qaar waxa ay ku sifeeyaan shaqsi hal adag, hadal yaqaan geesi ah, warkiisana aan inta badan la gaban oo ay u dheer tahay macangagnimo, waana nin ku haboon sida ay sheegeyn qababashada xilka madaxweynenimo ee dowlad goboleedka Hirshabeelle oo dhawaan la filayo in ay doorasha ka dhacdo, inkastoo muran xoogan uu ka jiro qaabka iyo waqtiga ay qabsoomeyso doorashadaas.
Daawo qaabkii uu Sanbaloolshe shuruuda adag ugu xiray marashaxnimadiisa xilka Madaxweynaha Hirshabeelle waqti xaadirkan.
Waxaa soo baxaya warar ku saabsan in Madaxtooyada Soomaaliya ay dad gaar ah la dooneyso hogaanka sare ee maamulka Hirshabelle, xili uu dhamaad hadda yahay jiritaanka maamulka uu Hogaamiyo Madaxweyne Waare.
Dhismaha maamulka Hirshabelle ayaa hadda wajahaya caqabado adag oo laga cabsi qabo in uu bur bur u horseedo maamulkaasi 4-tii sano ee uu jirayna aan waxba ka qaban labada gobol uu ka taliyo.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in ay wado qorshe ay ku dooneyso in isbadal lagu sameeyo hogaanka sare ee maamulkaasi gaar ahaan xilka Madaxweynaha oo horey loogu qoondeeyay reer Hiiran.
Siyaasiyiin ayaa laga soo xigtay in Villa Soomaaliya dooneyso in xilka Madaxweynaha Hirshabelle la siiyo shaqsi kasoo jeeda Shabeeladda Dhexe gaar ahaan waxa ay aad u daneeneysaa villa Soomaaliya mudane Cali Guudlaawe oo awood ku leh Shabeelaha Dhexe.
Qorshaha Villa Somali waxaa si weyna uga soo horjeeda siyaasiyiinta iyo waxgaradka reer Hiiraan oo iyagu ku hanjabay in ay isaga baxayaan maamulka Hirshabelle haddii lagu qabsado xilka madaxweynaha .
Madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa ayaa hadda wado wadatashiyo ku aadan sida ugu macquulsan ee loo mari karo dhismaha maamulka Hirshabelle oo hadda dib u dhiskiisa caqabado xoogan lasoo darseen.
Dadka siyaasada falanqeeya ayaana aaminsan in suurto gal noqon karto in Villa Somalia wax ka bedesho qorshihii hore ee xilka Madaxweynaha ula dooneysay reer Shabeelaha dhexe hadii uu kordho caqabadaha hadda ku horgudban dhismaha maamulkaasi.
Doorashada maamulka Hirshabeelle ayaa kusoo aaday xili xasaasi ah oo laguda gali rabo doorashada Baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaana doorashada Hirshabelle hadda soo foodsaaray caqabado dib u dhac u keeni karo dhismaha maamulkaasi.